China Hoodie orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Fahitana
Ireo pataloha azo namboarina ireo dia manana paosy matevina be sy feno paosy ary paosy paosy fanampiny lehibe, toy ny akanjo lava any an-tsekoly. Ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe dia hankasitraka ny loko malefaka sy malefaka amin'ny vozona. Ny fifangaroan'ny landihazo polyester dia midika fa tsy dia mihena izy ireo.
1.Ireo hoodies azo nohaingoina ireo dia manana paosy lehibe sy paosy ary paosy paosy fanampiny lehibe, toy ny akanjo lava any an-tsekoly. Ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe dia hankasitraka ny loko malefaka sy malefaka amin'ny vozona. Ny fifangaroan'ny landihazo polyester dia midika fa tsy dia mihena izy ireo.
2. miaraka amina loko 20 mahery, vonona ho an'ny vondrona misy anao na hetsika manokana ireo hood pullover ireo. Izy ireo dia miaraka amin'ny loko voamarina amin'ny fahitana avo lenta ihany koa, izay mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny famolavolana ny kliobanao na ny ekipa miasa any ivelany. Ary koa, ny namboarina dia azo atao, mila manome ny kaody miloko pantone tianao fotsiny ianao.
santimetatra Size S M L XL 2XL 3XL 4XL
halavan'ny 26.5 27.5 28.5 29.5 30 30.5 31
sakany 20 22 24 26 28 30 32
Teo aloha: fanao am-polony pirinty banga polyester mihazakazaka famantarana T shirt
Manaraka: ambongadiny polyester spandex mens sports track mihetsiketsika pataloha hatsembohana amin'ny tsipika
Hoodies vita pirinty namboarina